Sonke Siyafuna Ukuthuthuzelwa
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Isi-Iban Isi-Ibanag Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAukan IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBaoule IsiBashkir IsiBatak (SaseKaro) IsiBatak (SaseToba) IsiBengali IsiBhulu IsiBiak IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCakchiquel (Sakumbindi) IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChokwe IsiChol IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiKabiye IsiKannada IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLamba IsiLatvia IsiLhukonzo IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMarathi IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMbunda IsiMizo IsiMongolia IsiMoore IsiMyanmar IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNgangela IsiNgesi IsiNias IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPidgin (SaseCameroon) IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiQuichua (SaseChimborazo) IsiQuichua (SaseImbabura) IsiRashiya IsiRomania IsiRunyankore IsiSamoa IsiSango IsiSaramaccan IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTojolabal IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiUrhobo IsiUruund IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiWallisian
INQAKU ELINGUMXHOLO | UNOKUYIFUMANA PHI INTUTHUZELO?
Usazikhumbula usiwa ngoxa wawusemncinci? Mhlawumbi wasikeka esandleni okanye wagruzuka idolo. Usayikhumbula indlela awakuthuthuzela ngayo umama wakho? Mhlawumbi wacoca elo nxeba waza walibopha. Wawulila, kodwa wakugona, ethetha amazwi amnandi, waza wathula. Ngelo xesha, wayehlala ekho umntu okuthuthuzelayo xa kukho into ekukhathazayo.
Njegoko sikhula, ubomi buya busiba nzima. Kufika ingxaki emva kwenye, kwaye banqabile nabantu bokusithuthuzela. Kubuhlungu ukuthi, iingxaki zabantu abadala azinakuconjululwa lula njengokubotshwa inxeba nokugonwa ngumama. Nantsi imizekelo embalwa.
Wakha wayifumana intlungu yokuphelelwa ngumsebenzi? UJulian uthi ukugxothwa kwakhe emsebenzini kwamothusa kakhulu kangangokuba wazibuza, ‘Ndiza kuyinyamekela njani intsapho yam? Emva kweminyaka ndisebenzela le nkampani, kutheni ingasandifuni nje ngoku?’
Mhlawumbi usentlungwini yokuphelelwa ngu- mtshato. URaquel uthi: “Ndaba buhlungu nyhani xa ndashiywa ngumyeni ndingacinganga kwiinyanga eziyi-18 ezidlulileyo. Intliziyo yayilihlwili.”
Kuthekani ukuba ugula kakhulu kwaye awude uchache. Ngamany’ amaxesha usenokufana nosolusapho uYobhi owathi: “Ndibugatyile [ubomi bam]; andiyi kuphila ukusa kwixesha elingenammiselo.” (Yobhi 7:16) Mhlawumbi uziva njengoLuis, indoda ekhulileyo ekwiminyaka yoo-80 eyathi, “Ngamany’ amaxesha iba ngathi sendilinde ukufa.”
Masithi ufuna ukuthuthuzelwa ngenxa yokuba uswelekelwe ngumntu omthandayo. URobert uthi: “Xa unyana wam wasweleka kwingozi yenqwelo-moya ndandisithi kuyaxokwa. Emva koko, zabuya iingqondo. Intlungu endandikuyo yayingathetheki.”—Luka 2:35.
URobert, uLuis, uRaquel, noJulian bathuthuzelwa kwezo ntlungu zingathethekiyo. Bathuthuzelwa ngoyena mntu ukwaziyo ukuthuthuzela, uThixo uSomandla. Uthuthuzela njani? Ngaba nawe uya kukuthuthuzela xa usentlungwini?